Ahoana ny fomba hitantanana ny sambonao miaraka amin'i Odoo? | Avy amin'ny Linux
Miatrika sy mahafantatra karazana isan-karazany aho rindrambaiko open source ho an'ny orinasa, fa tsy matahotra ny ho diso aho dia mihevitra an'izany Odoo Izy io dia iray amin'ireo mety hampifanaraka azy ankehitriny, satria ny firafiny, ny fiaraha-monina misy azy ary ny fampiasana azy io dia mamela anao hamorona asa ho an'ny maodely na asa aman-draharaha.
Mora sy haingana ny fanatanterahana azy ampifanaraho amin'ny saika ny tsena rehetra ny Odoo Noho ny habetsaky ny modules misy, ny fanamorana ny fahazoana ny kaody loharano sy ny antontan-taratasy lehibe hita hanatsarana ny ERP izay manome antsika fototra mazàna matanjaka izay mamela azy hampiasaina amin'ny orinasa kely sy salantsalany ary lehibe. .
Ampahany tena lehibe amin'ny ankamaroan'ny maodelim-barotra ankehitriny ny mitantana ny fiaramanidinao (indrindra ireo orinasa miadidy ny varotra vokatra azo tsapain-tanana na ny famindrana vokatra), ity dingana tsotra izay mitaky fanaraha-maso mandroso ity amin'ny ankapobeny dia tanterahina amin'ny takelaka izay amin'ny mizana lehibe dia lasa safidy somary manahirana ary mety misy fatiantoka vaovao na tsy fifehezana. Mihevitra fa ity dingana ity dia mety hahomby kokoa, laharam-pahamehana amin'ny fikambanana maro izy io ary ny fitantanana fiaramanidina marina mamela amin'ny tranga maro mampitombo tombony na mampihena ny vidiny, Odoo dia nametraka modely fitantanana fiaramanidina mandroso, izay loharano misokatra, maimaimpoana ary mahomby.
1 Inona ny rafitra fitantanana Odoo Fleet?
2 Endri-javatra amin'ny Rafitra Fitantanana Fleet Odoo
3 Ahoana ny fametrahana ny rafitry ny fitantanana Odoo Fleet?
Inona ny rafitra fitantanana Odoo Fleet?
El Rafitra fitantanana Odoo Fleet, dia fitaovana mandroso izay mamela anao hitantana ny toetra mampiavaka ny fiaran'ny orinasa iray, ao anatin'izany ny mampiavaka ny fiara toy ny marika, loko, isan'ny seza, mpamily, takelaka, solika, sns. Toy izany koa, manome antsika ny mety mitantana ny fampahalalana mifandraika amin'ny fiara toy ny fifanarahana, ny vidiny, ny fiantohana, ny tambin-karama, ny fanjifana sns., izany rehetra izany avy amin'ny interface intuitive, haingana sy mahomby.
Miaraka amin'ny Odoo Fleet Management System izay azontsika atao manana fanaraha-maso vaovao izay ahafahantsika manoratra ny fanjifana sy ny vidiny mifandraika amin'ny fiara, amin'izay dia ho afaka hifampidinika haingana izahay miaraka amin'ireo tatitra misy fizarana na daty na vanim-potoana. Toy izany koa, manome antsika ilay fitaovana fampandrenesana mailaka mifandraika amin'ny fahataperan'ny fifanarahana mifamatotra amin'ny fiara, nanampy an'io, manome antsika ny fahafaha-mandinika tsara ny vidin'ny fiaramanidina rehetra eto amintsika, izay ahafahantsika manadihady haingana ny fanapahan-kevitra horaisina momba ny faharetana sy ny fahombiazan'ny fiaranay.
Ny Odoo's Fleet Management System dia azo ampidirina amina modules hafa misy amin'ity sehatra ity, ka azontsika atao koa ny mampifandray ny fandaniana amin'ny solika amin'ny fandaniam-bolan'ny mpiasanay na mandeha an-tsoratra ny fivezivezena an-tsokosoko ao amin'ny tatitra momba ny kaonty, avy amin'ny fitaovana tokana sy ny fizotrany mandeha ho azy.
Endri-javatra amin'ny Rafitra Fitantanana Fleet Odoo
Ny Odoo's advanced Fleet Management System dia manana endrika isan-karazany, ary azontsika atao ny manasongadina:
Mamela anao hitahiry fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fiara toy ny make, modely, takelaka, laharana chassis, isan'ny varavarana sy seza, loko, karazana solika ampiasaina, ankoatry ny hafa.
Azontsika atao ny manoratra ny angon-drakitra an'ny mpamily (anarana, fahazoan-dàlana mitondra fiara, ID, telefaona sns).
Io dia mamela ny fanamoriana ny fiara mba hahafahantsika manasokajy azy ireo arakaraka ny toetra tiantsika, ohatra, fiara manokana, fiara azo ovaina, fiara sedan, sns.
Karazan-tahiry maoderina hampiasa ilay fitaovana amin'ny fomba mahomby kokoa, ny tena tompon'andraikitra dia: Vehivavy Model, Vehicle Make, Vehicle Status, Karazana Serivisy, Tags Vehicle, Fiara ary mpamily.
Io dia ahafahanao mitantana isan-karazany ny fifanarahana sy ny fanofana raha raisina ny datin'ny fanatanterahana azy ireo sy ny daty famaranana azy ireo, ary koa ny vidiny voalohany amin'ny fifanarahana sy ireo vidiny miverimberina, amin'ny fomba mitovy, mandefa hafatra mailaka rehefa ho tapitra ireo fifanarahana ireo.
Izy io dia manana fitantanana mandroso ny odometry ny fiara izay azonao ampifandraisina amin'ny firaketana ny fanjifana solika, ahafahantsika mahafantatra ny fanjifana solika isaky ny kilometatra izay lasa fitantanana mandroso amin'ny fandaniana.
Izy io dia mamela ny fitazonana ny tantara sy ny firaketana ny fikojakojana mifandraika amin'ny fiara, ary koa ny mety hisian'ny fandaharam-potoana hoy ny fikojakojana aorian'ny fotoana voatondro, izy ireo dia mifandray amin'ny fandaniana amin'ny fandaminana.
Manana tatitra haingana sy mandroso izay ahafahantsika manana hevitra mazava momba ny fiaranay sy ny fiaramanidina amin'ny ankapobeny.
Fahafahana miditra amin'ny fitaovana fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy.
Ampifandraisina amin'ireo maody Odoo rehetra.
Ahoana ny fametrahana ny rafitry ny fitantanana Odoo Fleet?
Ny rafi-pitantanana Odoo Fleet Management dia eo anelanelan'ny modules zanatany Odoo Community and Enterprise, mila mametraka ilay kinova tianay indrindra fotsiny isika, mankanesa any amin'ny tabilao APP ary mampihetsika ny modely Fleet, tsy mila misy ilay maody. fikirakirana teknika satria mamorona ho azy ny fikirakira ilaina rehetra.
Mba hanombohana ny famaritana ny mody, tsy maintsy ampodirintsika tsotra izao ny maody mpamorona ny odoo, avy eo mankanesa any amin'ny menio fiaramanidina ary tadiavo ny fizarana Configuration, ao no ahitantsika andiana tompo izay antsipirintsika eto ambany:
Marika fiara: Azontsika atao ny mamorona marika fiara ary mampifandray sary azy io.
Modelin'ny fiara: Mamorona maodelin'ny fiara azonay ifandraisana amin'ny marika iray izahay ary mamaritra koa ny mpamatsy izay tsy mivarotra azy ireo.
Fiaran'ny fiara: Ity tompo ity dia mamaritra ny filazan'ny fanjakana fa ny fiara dia mavitrika, tsy miasa, amidy na simba.
Karazana serivisy: Azontsika atao ny manoratra ny serivisy na ny fifanarahana rehetra azo raisina amin'ny fiara, toy ny kojakoja izay ampiasaina ho toy ny kojakoja, fampanofana na fanovana kodiarana.
Tags fiara: Ity tompo ity dia manome antsika ny fahafaha-manasokajy na manisy marika ny fiaran'ny fiaranay amin'ny toetra samihafa toa ny karazana fiara (Sedan, Azo ovaina), ny karazan-tsarimihetsika (novidiana, nohofana) na afaka mampiasa fiara (mpiasa, mpitantana) fotsiny.
Raha vantany vao noforonina ireo tompony, dia mila misoratra anarana fotsiny amin'ny fiaran'ny fiara isika, izay hampifandraisinay ny marika, ny maodely, ny takelaka, ny mpamily, ny fananany, ny lanjan'izy ireo ary ny daty azony, ankoatry ny toetra hafa.
Avy eo dia tsy maintsy ataontsika ny firaketana ireo fifanarahana mifandraika amin'ny fiara, ny fantsom-bidin'ny fiara, ny fanjifana solika, ny serivisy mifandraika amin'izany ary ny fikojakojana azy, izay hamelona ho azy ny tantaran'ny vidin'ny fiara, izay ahafahantsika mijery ny tatitra momba ny vidiny sy ny vidiny. .
Amin'izany fomba izany, Odoo dia manome fitaovana tsotra hampiasaina nefa misy fiatraikany lehibe amin'ny fitantanana ny entam-bolan'ny orinasanay izany, ahafahantsika manana firaketana an-tsoratra amin'ny fotoana rehetra momba ny satan'ny fiara sy ny fiaran'ny fiara, izay manome antoka koa fa handeha hahafahana mampandrenesina rehefa tsy maintsy manao fifanarahana fiantohana na serivisy vaovao izahay, na hoe mila manao fikojakojana fisorohana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fomba hitantanana ny sambonao miaraka amin'i Odoo?
Afaka nanandrana ny Fleet Management niaraka tamin'ny ODOO aho, ary taorian'ny zavatra rehetra novakiako momba ilay vokatra dia nanantena zavatra betsaka kokoa aho. Diso fanantenana aho tamin'ny fiasa ifotony izay ananany, tsy manome ny fahombiazan'ny kilometatra ananan'ireo fiara, araka ny fanjifana solika, tsy mamela ny fitazonana katalaogin'ny kojakoja ampiasaina amin'ny fiaramanidina, tsy voafehiny ny fiara mifono solika ho an'ny fiara, tsy voafehiny fanovana kodiarana sy karapanondro isaky ny kodiarana, tsy misy programa fitsangatsanganana ho an'ny fiara tsirairay, tsy mifehy ny politikam-piantohana, tsy mifehy ny fahazoan-dàlan'ny mpamily, tsy mifehy ny fitakiana fiara. Manantena aho fa hanampy anao ity fanadihadiana fohy ity. mahafaly
Valio amin'i JORGE RIOS
Fihaonana ho an'ireo manam-pahaizana momba ny SUSE any Barcelona